တနင်္ဂနွေည ရာသီသိမ်းပွဲစဉ်များမှ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » တနင်္ဂနွေည ရာသီသိမ်းပွဲစဉ်များမှ
Posted by မောင် ပေ on May 13, 2012 in Creative Writing, Hobbies & Games | 8 comments
မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျား ။
သည်ကနေ့ ည မှာ အင်္ဂလန် ပရီးမီးယားလိဂ် ၊ အီတလီ စီးရီးအေ နဲ့ စပိန် လာလီဂါ အမှတ်ပေး ပွဲစဉ်များ ရဲ့ နောက်ဆုံးပွဲစဉ် ကို ကစားကြမှာဖြစ်ပါတယ် ။ အင်္ဂလန် ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ချန်ပီယံ ဘယ်သူ လဲ ဆိုတာ အဖြေ မထွက်သေးပေမယ့် ၊ စပိန် နဲ့ အီတလီ မှာတော့ ရီးရဲမက်ဒရစ် နဲ့ ဂျူဗင်တပ် တို့ က ချန်ပီယံများဖြစ်သွားပါပြီ ။ သည်ည အင်္ဂလန်ပွဲတွေထဲမှ အားပေးသူများ ကို အလုပ်ကျွေးပြုနိုင်တဲ့ အသင်းများနဲ့ စပိန် အီတလီ တို့ မှ ပွဲများ ကို ရွေးခြယ်ကြည့်ရာမှာ…
8.30 ချဲဆီး(၆) – ဘလက်ဘန်း(၁၉)
8.30 အဲဗာတန်(၇) – နယူးကာဆယ်(၅)
8.30 မန်စီးတီး(၁) – ကျူပီအာ(၁၇)
8.30 နော့ဝစ်(၁၃) – အေဗီလာ(၁၆)
8.30 စတုတ်(၁၄) – ဘော်တန်(၁၈)
8.30 ဆန်းဒါးလန်း(၁၁) – မန်ယူ(၂)
8.30 ဆွမ်စီး(၁၂) – လီဗာပူး(၈)
8.30 စပါး(၄) – ဖူဟမ်(၉)
8.30 ဝက်ဘရွန်း(၁၀) – အာဆင်နယ်(၃)
8.30 ဝီဂန်(၁၅) – ဝုဗ်(၂၀)
10.30 စီစီနာ(၂၀) – ရိုးမား(၇)
10.30 ပါးမား(၈) – ဘိုလော့နာ(၉)
1.15 ကာတားနီးယား(၁၀) – အူဒီနီး(၃)
1.15 ချီဗို(၁၂) – လက်ချီ(၁၈)
1.15 ဂျီနိုအာ(၁၇) – ပါလာမို(၁၅)
1.15 လာဇီယို(၄) – အင်တာမီလန်(၆)
1.15 နာပိုလီ(၅) – ဆီနာ(၁၄)
12.30 အက်စ်ပန်ညို(၁၄) – ဆီဗီလာ(၉)
12.30 ဂီတာဖေး(၁၃) – ဇာရာဂိုဇာ(၁၈)
12.30 လီဗန်တေး(၆) – ဘီဘာအို(၁၀)
12.30 မာလာဂါ(၄) – ဂီဂျွန်(၁၉)
12.30 ရေဆင်း(၂၀) – အိုစာ(၈)
12.30 ဗယ်လကာနို(၁၇) – ဂရာနာဒါ(၁၅)
12.30 ရီးရဲမက်ဒရစ်(၁) – မာယော့ကာ(၇)
12.30 ဗီလာရီးရဲ(၁၆) – အသလက်တီကို(၅)
ဒီညပွဲတွေထဲမှ ဈေးမှားနေတဲ့ ၊ မနိုင်ရင်မဖြစ်တဲ့ အသင်းများကို ရွေးခြယ်လိုက်ပါတယ်
ဖီအိုရင်တီးနား (၁၃) – ကယ်ဂလီယာရီ (၁၆)
၂သင်းစလုံး တန်းလဲမဆင်းရ ၊ အပေါ်လဲ ရောက်စရာ အကြောင်းမရှိတော့တဲ့အနေအထားမှာ ၊ ရာသီနောက်ဆုံးပွဲစဉ် ကို အိမ်ကွင်းမှာ ကစားရမယ့် “ ဖီအိုရင်တီးနား ” အနိုင်နဲ့ သိမ်းသွားမှာပါ ။
ဈေးအနေအထားအရလဲ အာရှဘက်မှာ ဖီအိုရင်တီးနား သရေဆိုရင် ၅၀ ရှုံးရမယ့် အနေအထား ကို ဖီအိုရင်တီးနား သရေ ၇၀ အရှုံး ဖွင့်လာပါတယ် ။ ဒါဟာ ကယ်ဂလီယာရီ ခေါ်ထားတာပါ ။
“ ဖီအိုရင်တီးနား ” အနိုင်သေချာနေပါတယ် ။
ဝက်ဘရွန်း(၁၀) – အာဆင်နယ်(၃)
အစကတော့ အာဆင်နယ် လုပ်ကန်တတ်လွန်းလို့ ၊ အာဆင်နယ် ရှောင်မလို့ ပါဘဲ ။ ဈေးအနေအထားအရ ဝက်ဘရွန်းဘက်ကို ကျုံးသွင်းနေတဲ့အချိန်မှာ အာဆင်နယ် ခပ်ပါးပါးလေး ရင်းရင် အမြတ် နဲတာနဲ့ များတာဘဲ ကွာမယ် လို့ ထင်ပါတယ် ။
ဝက်ဘရွန်းဟာ အပေါ်မရောက် အောက်မရောက်ပါ ။
အာဆင်နယ် သာ ၊ ချဲဆီး ကို ချန်ပီယံလိဂ် မရခဲ့ဘူးလို့ ကြိမ်းသေသိထားပြီး ဖြစ်မယ်ဆိုရင် သည်ပွဲ ကို အရှုံးထိ ကန်နိုင်ပါတယ် ။ မသိခဲ့ဘူး ဆိုရင်ကော…. အနိုင်ကန်ထားမှ စိတ်ချရပါမယ် ။
ဈေးအနေအထားအရ အာဆင်နယ် တစ်ဂိုး၅၀ အနိုင် အနေအထားကို အာဆင်နယ် တစ်ဂိုး ၂၅ အနိုင်ဘဲ ပေးလာပါတယ် ။ အာဆင်နယ် နိုင်မယ် ဂိုးမပြတ်ဘူး လို့ ယူဆထားပုံပါဘဲ ။
“ အာဆင်နယ် ” ကို ခပ်ပါးပါးလေးရင်းကြည့်ရင် အမြတ်ရဖို့ ၆၀%လောက်တော့ ရှိပါတယ် ။
စပါး(၄) – ဖူဟမ်(၉)
သည်ညမှာ အင်္ဂလန် ပွဲများမှ ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်ရဖို့ အတွက် အိမ်ကွင်းမှာ အနိုင်သေချာပေါက် ကစားမယ့် “စပါး” ဟာ အားပေးသူများကို ပျော်ရွှင်စေမှာ ၉၀ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိပါတယ် ။
ဈေးအနေအထားအရ စပါး တစ်ဂိုးသွင်းရင် ၅၀ ဆုံးရှုံးမှု ကို စပါး တစ်ဂိုး ၆၀ အရှုံး ဖွင့်လာမှု ဟာ ဖူဟမ် ကို ခေါ်ထားတာပါ ။ ဖူဟမ် ဟာ ဘာမျှော်လင့်ချက်မှ မရှိဘဲ ၊ အေးအေးလူလူ အသင်းမို့ ၊ စပါးရဲ့ နိုင်လိုစိတ် နဲ့ ခြေကုန်ထုတ်လာမှု ကို တားဆီးနိုင်စွမ်း မရှိလောက်ပါဘူး ။
““ စပါး ”” ကို အားပေးရင် ပျော်ရပါမယ် ။
မန်စီးတီး(၁) – ကျူပီအာ(၁၇)
သူတို့ တွေ အတွက် တစ်ခုထဲသော ချန်ပီယံဆု ကို ဒီလိုနောက်ဆုံးအချိန်ကြမှ လက်လွှတ်မယ် လို့ မစဉ်းစားရဲဘူးဗျာ ။
ဈေးအနေအထားလေးနဲ့ တင် မန်စီးတီး ကို အားပေးသင့်ပါတယ်။ ကျူပီအာ ဟာ ဒီပွဲသရေရရင် ကို တန်းမဆင်းရတော့ဘူး ၊ ဈေးကလဲ မန်စီးတီး က ၃ ဂိုးပြတ်မှ အပြည့်ရှုံးမှာ ဆိုပြီး ကျူပီအာဘက်မှာ နေချင်စရာ အရမ်းကောင်းလှအောင် ဈေးဖွင့်လာပါတယ် ။
အာရှဘက်မှာ မန်စီးတီး ၂ ဂိုး ၅၀ အရှုံး ကို ၆၀ အရှုံး လို့ ဖွင့်လာပါတယ် ။
အားပေးသူများ ကို ကျူပီအာဘက်လာကြစမ်း ဆိုတဲ့ သဘောပါ ။
““ မန်စီးတီး ”” အိမ်ကွင်းမှာ ဂိုးမိုးရွာပြီး ပရီးမီးယားချန်ပီယံဆု ကို ယူသွားမယ်ဆိုရင် အံ့သြစရာ မကောင်းပါဘူး ။
“““ မန်စီးတီး ””” ပါဘဲ ။
နော့ဝစ်(၁၃) – အေဗီလာ(၁၆)
သည်ပွဲဟာလဲ ဈေးအနေအထားဟာ မှားယွင်းနေပါတယ် ။
နော့ဝစ် သရေဆိုရင် အပြည့်ရှုံး ကို သရေ ၈၀ အရှုံးဘဲ ဖွင့်လာတာ ဟာ အေဗီလာ အားပေးမယ့် သူတွေ ကို အပြည့်အနိုင်မပေးဘူး ဆိုတဲ့သဘောပါ ။
အာဆင်နယ် ကို အားပေးမယ်ဆိုရင် ““ အေဗီလာ ”” ကိုပါ တွဲဖက် အားပေးသင့်ပါတယ် ။
““ အေဗီလာ ”” အနိမ့်ဆုံး သရေ ကန်မယ့်ပွဲပါ ။
နာပိုလီ(၅) – ဆီနာ(၁၄)
နာပိုလီ အနေနဲ့ နောက်နှစ်ရာသီ ချန်ပီယံလိဂ် ဝင်ချင်တယ် ဆိုရင် သည်ပွဲကို အနိုင်ကစားရပါမယ် ။ ဈေးအနေအထားအရလဲ နာပိုလီ ဟာ နှစ်ဂိုးဆိုရင် အပြည့်နိုင်ရမယ့် ဟာ ကို နှစ်ဂိုးမှ ၇၅ အနိုင်ဘဲ ပေးလာတာ ဟာ နာပိုလီ အနိုင်သေချာနေတဲ့သဘောပါဘဲ ။
“““ နာပိုလီ ””” ဟာ အားပေးသူများကို ပြည့်ပြည့်ဝဝ ပျော်ရွှင်စေမှာပါ ။
ကျနော်နဲ့အကြိုက်ချင်းတူတယ် အူးပေရေ့
တနင်္ဂနွေနေ့ မှာ အပျင်းပြေကြရအောင် ရေရောသောက် အဲလေ..ယောင်လို့ ..အူးပေနဲ့ဘောကစားကြပါစို့ ..ရွာစားတို့ 
တနှစ်ပတ်လုံးကစားလာတာ ဒီနေ့ တော့ အဆုံးသတ်ပီပေါ့။
မမျှော့်လင့်ရဲတော့ပေမယ့် မန်ယူလေးတော့ ချန်ပီယံဖြစ်စေ
ကဲ …ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် နုတ်ဆက်ခဲ.ရပြီပေါ. ဘောလုံးရာသီ ။
နောက်နေ.ကစပြီး မူပိုင်ဖြစ်တဲ. ကွမ်းပို.စ်တွေကိုမျှော်နေမယ်ဗျာ …။
မန်ယူ မရတာဟာ ဘော်တန် ကြောင့်ပါ ..
၁၉၉၉ တုန်းက မန်ယူ ဗိုလ်စွဲခဲ့တာလဲ ဘော်တန် ကြောင့်ပါ (အမှတ်တော့ လွဲချင်လွဲမယ် .. အဲဒီတုန်းက အာကြီး က တစ်မှတ်အသာနဲ့ ပွဲစဉ် ၃၈ ကို ဘော်တန်နဲ့ ပြိုင်နေတုန်း .. ဘော်တန်က သရေ ကစားသွားလို့ မန်ယူ ဖလားရခဲ့တယ်) (B တော့ B ပဲ ဘော်တန်လား ဘလက်ဘန်းလား မသေချာတာ)
အခုလဲ ဘော်တန် နိုင်နေလို့ QPR က မန်စီးတီးကို အနိုင်ကစားနေတာ .. နို့မဟုတ်ရင် သူ တန်းဆင်းရမှာလေ .. ဘော်တန် သရေနဲ့လဲ ပြီးသွားရော ရှုံးရှုံးနိုင်နိုင် အဓိက မကျတော့ ကစားအား လျှော့လိုက်တဲ့အချိန်မှာ မန်စီးတီး ပျော်သွားတာပါ ..
အဆုံးသတ်တော့ QPR တန်း မဆင်းရဘူး .. မန်ယူ ဖလား မရဘူး ပေါ့ ..
အားလုံး သိပြီးသား ဖြစ်တဲ့အတိုင်း
စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာတွေနဲ့ မန်စီးတီးက သိမ်းပိုက်သွားခဲ့ပါပြီ ….
အဲဒီ ဘောလုံးပွဲကြည့်ပြီး ကျနော်တော့ တစ်ခု သတိရလိုက်မိတယ် …
ဘဝမှာ မထင်မှတ်တဲ့ အချိန်ပိုင်းအတွင်း ဘာမဆို ဖြစ်သွားနိုင်တယ် … လို့ ….